Waxbarashada Bulshada - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Barnaamijyada Waxbarashada Bulshada ee Degmada 196 waxay ku dadaalaan inay xoojiyaan bulshada iyagoo adeegsanaya barashada nolosha oo dhan. Baro Ingiriisiga, soo hel isboorti cusub, hel xirfad cusub, baro dabaasha, sahamiso meel cusub, ka abuur jikada ama istuudiyaha, hel xamaasad cusub. Waxaan rajaynaynaa inaad ka qaybqaadan doontaan oo aad hodan ku noqon doontaan oo dhiirigelin doontaan barnaamijyadeena. Suurtagalnimadu waa mid aan xad lahayn!
Badhanka "codso turjumaan"
Saacadaha Xafiiska 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Kala xariir taleefoongan 651-423-7920
Bogga Internetka ce.district196.org
Degmada 196 Waxbarashada Bulshada waxaa ka go'an inay siiso dhammaan tacliinta iyo fursadaha kobcinta.
Waxbarashada Aasaasiga ah ee Dadka Waaweyn (ABE)
Fasallada ABE waa u bilaash dhammaan ardayda. Maalgelinta goobaha ABE, fasallada, macallimiinta iyo barnaamijyadu waxay ka yimaadaan miisaaniyadda waxbarashada dadka waaweyn ee dawladda dhexe iyo gobolka oo ay qaybiso Gobolka Minnesota.
Barnaamijyada Dhalinyarada Dugsiga kadib
Ardayda ku jirta Barnaamijka Faa'iidooyinka Waxbarashada (oo hore u ahaa Cunnooyinka Bilaashka ah iyo kuwa La-dhimay) waxay helayaan qiimo dhimis 50% ah mid ka mid ah khidmadda fasalka dugsiga kadib xilli kasta. Haddii ardaygu rabo inuu iska diiwaangeliyo fasalka labaad, khidmadda fasalka ee fasalka labaad waa in la bixiyaa si buuxda. Caawinta khidmadda (dhimista 50%) waxaa lagu buuxin karaa onlayn, telefoon ama foomka diiwaangelinta oo dugsiga laga soo diray. Haddii aad rabto inaad codsato kaalmada ujrada ah fasalka dugsiga kadib markaad iska diiwaangelinayso internetka, fadlan ka dooro khidmadda fasalka labaad ama saddexaad xulashada khidmadda hoos-u-dhaca. Waxa kale oo aad buuxin kartaa macluumaadka ku habboon foomka diiwaangelinta oo aad u dhiibi kartaa macallinka fasalka ilmahaaga ama waxaad wacdaa diiwaan-hayaha Waxbarashada Bulshada 651-423-7920. Codsiyada gargaarka khidmadu waxay ku xiran yihiin xaqiijin.
Biyaha, Barnaamijyada Horumarinta Dadka Waaweyn iyo Horumarinta Dhallinyarada
Dadka waaweyn ee jira 55+ waxaa laga yaabaa inay helaan qiimo dhimis 10% ah fasallada qaarkood. Waxyaabaha ka reeban waxaa ka mid ah cunto karinta, farsamada gacanta iyo farshaxanka, barbaarinta/CEU, socdaalada, guriga, dayrka iyo beerta, ama si kale loo xusay. Wac 651-423-7920 Horumarinta dadka waaweyn iyo 952-431-8777 barnaamijyada biyaha si loo diiwaangeliyo loona helo sicir-dhimista.
Dadka waaweyn ee jira 15+ waxaa laga yaabaa inay helaan qiimo dhimis 10% ah fasallada qaarkood. Wac 651-423-7920 Horumarinta dadka waaweyn iyo 952-431-8777 barnaamijyada biyaha si loo diiwaangeliyo loona helo sicir-dhimista.
Caawinta khidmadda* waxaa loo heli karaa deganeyaasha 196 ee ku jira Barnaamijka Faa'iidooyinka Waxbarashada (oo hore u ahaa Lacag Bilaash ah iyo Lacag-La-dhimay) ama la kulma dhibaato dhaqaale, iyadoo la hubinayo. Caawinta khidmadda waxaa loo heli karaa hal fasal, qofkiiba, aagga barnaamij kasta, xilli kasta (fiiri shabakadda hoose ee dhimista).
*Waxaa ka reeban casharrada dabaasha ee gaarka loo leeyahay/kuwa gaarka loo leeyahay, bixinta iyo tigidhada.
Si aad u codsato Kaalmada Lacagta
Online-ka: https://forms.gle/RR37xp6Rf1K478ka9 waxaanan kuugu yeeri doonaa inaad lasocoto,
Boostada/Iimaylka/Keenis* kan oo dhammaystiran barnaamijka hoos ku qoran, ama
Wac barnaamijka hoos ku qoran.
* Sanduuqa ku tuurista, badbaadsan oo 24-saac ah wuxuu yaallaa Degmada 196 Waxbarashada Bulshada, 15180 Canada Avenue ee Rosemount.
Wixii macluumaad dheeraad ah, ha ka waaban inaad la xiriirto xafiisyadeena:
Adeegyada Qoyska ee Carruurnimada Hore | ECFE
Khidmadaha fasalka waxaa lagu go'aamiyaa miisaanka khidmadda oo ku salaysan dakhliga qoyska. Deganeyaasha Degmada 196 waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ka soo qeybgalaan iyadoon loo eegin awoodda ay u leeyihiin inay wax bixiyaan. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ECFE, wac 952-388-1953.
F '21 Sliding Fee Scale (place here)
Xiriirinta Dugsiga Barbaarinta
Caawinta waxbarashada iyo deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa qoysaska leh baahi la aqoonsaday. Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan Iskuulka Xannaanada, wac 952-388-1960.
2021-21 Fee Schedule (place here)
River Valley (dadka waaweyn ee naafada ah)
Ka hubso shaqaalaha maaliyadda ee degmadaada si aad u ogaato haddii aad awooddo inaad u isticmaasho lacagta dhaafitaanka degmadaada si aad u daboosho khidmadaha fasalka. Xidhiidhka
UCare ee xubnaha MA waxay helayaan qiimo dhimis $15 ah hawl kasta oo Sahaminta Mashruuca iyada oo aan xad lahayn tirada waxqabadyada sannadkiiba.
RVPE Foundation waxay kaloo bixisaa kaalmo lacag ah ilaa $ 100 qofkiiba sanadkii.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo si aad u codsato kaalmo ujro ah hawlaha Waxqabadka Mashruuca Dooxada River, iimayl projectexplore@district196.org ama wac 651-423-7931.
Soo hel sida loo taageero fursadaha waxbarasho ee aan dhammaadka lahayn ee Degmada 196. Taageer Fursadaha aan la koobi karin ee Bulshada Degmada 196 Ku tabaruc wax -barashada Waxbarashada Degmada 196!
Sannad kasta, in ka badan 50,000 oo Deganeyaasha 196 ah ayaa ku hawlan barnaamijka Waxbarashada Bulshada. Waxaan ku dadaaleynaa inaan ku bixinno barnaamijyadeenna qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah si aan ugu adeegno baahiyaha bulshadeena. Nasiib darro, qoysas badan oo Degmadeena ah ayaa halgan ugu jira inay bixiyaan. Barnaamijkeena kaalmada khidmadaha wuxuu caawiyaa kuwa u baahan inay ka qaybgalaan barnaamijyadeena oo bara xirfadaha nolosha daruuriga ah, ka caawiya shaqada, ama fidiya barashada fasalka. Sannadka 2019, waxaan siinnay kaalmo lacageed oo ka badan $ 50,000 oo loogu talagalay dhallinyarada u baahan inay ka qaybgalaan barnaamijyo tayo leh oo ay ka mid yihiin diyaarinta kulliyadda, casharrada dabbaasha iyo barnaamijyada shahaadaynta, caafimaadka iyo fayoobaanta, luqadaha iyo koorsooyinka STEM, iyo fasallada dugsiga ka dib iyo xeryaha isboortiga xagaaga. Ka -qaybgalayaashu waxay daba galeen danahooda, waxay ballaariyeen kartidooda, waxayna hagaajiyeen xirfadaha bulshada jawi xiiso leh oo ammaan ah. Kaliya maahan ka -qaybgalayaashu inay helayaan natiijooyin wax ku ool ah ka -qaybgalkooda barnaamijyada Waxbarashada Bulshada. Laakiin qoyska ka -qaybgalaha, dugsiga iyo bulshada dhammaantood way barwaaqoobaan marka dadku ku hawlan yihiin waayo -aragnimo waxbarasho oo tayo leh. Ku deeq si aad u caawiso ardayda u baahan inay ka qaybgalaan waxqabadyo waxbarasho oo tayo leh.
Waxbarashada Aasaasiga ah ee Dadka Waaweyn | ABE (da'da 17 iyo ka weyn)
Dugsiga Qoyska (waalidiinta iyo carruurta dhasha ilaa 5 jir)
Barnaamijyada Dugsiga Kadib (fasalada K-5)
Kobcinta Dhalinyarada (fasalada E-12)
Kobcinta Dadka Waaweyn (da'da 18+)
Barnaamijyada Biyaha (da 'kasta)
Ka hore iskuulka iskuxirka (da'da 3 iyo 4)
Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore. ECFE (waalidiinta iyo carruurtooda da'doodu u dhaxayso dhalashada ilaa 5 jirka)
Sahaminta Mashruuca River Valley (dadka waaweyn ee naafada ah)
Saacadaha Xafiiska 8:00 a.m.-4: 30 p.m.
Xarunta Waxbarashada Dooxada Cedar | CVLC | 14420 Glenda Dr, Apple Valley MN 55124
Xarunta Waxbarashada Dooxada Dakota | DVLC 4679 144th St W, Apple Valley MN 55124
Kala xariir 952-431-8316
Bogga Internetka ce.district196.org/abe
Bogga Internetka site ce.district196.org/familyschool
Kordhi maalinta iskuulka barnaamijka kobcinta dugsiga kadib!
Kicinta hal -abuurka, sahaminta xiisaha, soo hel farsamooyin cusub oo dhis xirfadaha tacliinta iyo bulshada… fursadaha aan xadka lahayn ee ardaydu wax ku baran karaan kuna kori karaan Hadday leeyihiin xiriir xagga tacliinta, farshaxanka iyo/ama ciyaaraha fudud, yoolkayagu waa inaan ardayda u bandhigno fursadaha aan dhammaadka lahayn. Samadu waa xadka Macallimiinta waxaa ka mid ah shaqaalaha dugsiga, xubnaha bulshada iyo ururada. Fasallada waa bilaash iyo deeq-waxbarasho ayaa la heli karaa
Kala xariir taleefoongan teltel:651-423-7920
Iimayl barnaamijyada skuul kadib afterschoolprograms@district196.org
Bogga Internetka: https://ce.district196.org/youth/after-school
Waxaan bixinnayna fasallo la awoodi karo sannadka oo dhan oo ku saleysan danaha ardayga. Ujeeddada Kobcinta Dhallinyarada ayaa ah in la siiyo fursado ay dhallinyaradu ku fushan karaan danahooda, ballaariyaan kartidooda iyo hagaajinta xirfadahooda bulsheed jawi rasmi ah, madadaalo leh oo ammaan ah. Fasalada la taageeray waxaa la siiyaa dhalinyarada da'doodu tahay 2-18 fiidkii, dhammaadka toddobaadka iyo inta lagu jiro maalinta xagaaga oo dhan. Laga soo bilaabo tababarka ilmaha ilaaliya ilaa fanka dagaalka, qoob ka ciyaarka, farshaxanka iyo farshaxanka, luqadaha, jimicsiga iyo isboortiga, Kobcinta Dhallinyarada waxay u leedahay qof walba wax! Kaalmada khidmada waa la heli karaa.
Bogga Internetka ce.district196.org/youthenrichment
Tusaalooyinka waxqabadyada, hagaajinta xirfadaha, isdhexgalka bulshada oo raac danaha meel wanaagsan. Laga bilaabo barashada qoob -ka -ciyaarka ilaa fasallada karinta ilaa koorsooyin ku saabsan bilaabidda meherad ilaa fasallo jirdhis ilaa barashada kombiyuutar xirfadeed ilaa maalmo -maalmeed ... qof walba wax baan u haynaa! Waxaa jira in ka badan 175 fasallo la awoodi karo oo la bixiyo xilli kasta, iyadoo lagu saleynayo danaha bulshada iyo baahiyaha waana lacag la taageero Caawimaad bilaash ah ayaa la heli karaa.
Bogga Internetka ce.district196.org/adultenrichmen
Ku raaxayso dhaqdhaqaaqyada dabaasha ee da 'kasta, xiisaha iyo kartida. Baro sida loogu dabaasho duruusta dabbaasha ee Laanqeyrta Cas. Ku raaxayso saaxiibbadaa iyo qoyskaaga dabaasha furan, oo ay ku jiraan dabbaasha furan ee dumarka oo keliya. Samee jimicsiga dabaasha iyo jimicsiga biyaha. Horumarinta tartanada dabaasha iyo quusidda, iyo kasbashada shahaado si aad u noqoto badbaadiye ama macallin dabaasha. Nabadgelyadu waa ahmiyadeena koowaad, ilaaliyayaasha noloshu waxay ku jiraan waajibaad dhammaan hawlaha biyaha ee Waxbarashada Bulshada. Caawimaad bilaash ah ayaa la heli karaa.
Dugsiga Dhexe ee Falcon Ridge | FRMS | Galitaanka Galbeedka/Heerka Sare ee Sare | 12900 Johnny Cake Ridge Road, Apple Valley, MN 55124
Kala xariir Taleefoongan 952-431-8777
Bogga Internetka ce.district196.org/swim
Carruurta saddex iyo afar jirka ah waxay xiriirro la dhisaan dadka kale iyagoo baranaya xirfadaha koritaanka iyo xannaanada ee muhiimka ah oo ay ku jiraan hal-abuurka iyo farshaxanka; luqadda iyo akhris -qoraalka; fikirka xisaabta iyo sayniska; xirfadaha jirka, iyo bulshada iyo dareenka. Waalidiintu waxay ku raaxaystaan ka -qaybgalka iyo fursadaha waxbarashada waalidka. Gargaarka waxbarashada iyo deeqaha waxbarasho ayaa la heli karaa.
Kala Xariir Taleefoongan 952-388-1977
Bogga Internetka ce.district196.org/preschool
ECFE waxay bixisaa fasalo kala duwan oo loogu talagalay carruurta dhasha ilaa 5 jir waalidkoodna loogu talagalay inay gacan ka geystaan xoojinta qoysaska iyada oo loo marayo ciyaar is-dhexgal iyo waxbarasho waalid oo ku salaysan cilmi-baaris. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto qoyskeena ECFE markaan wax wadaagno oo wax wada baranno. Waxaan aaminsanahay in qof walba u qalmo taageero iyo hagitaan safarkooda waalidnimo. Khidmadaha fasalka waxay ku saleysan yihiin dakhliga sanadlaha ah ee qoyskaaga waxaana lagu go'aamiyaa miisaanka ujrada. Deganeyaasha Degmada 196 waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ka soo qeybgalaan iyadoon loo eegin awoodda ay u leeyihiin inay wax bixiyaan.
Bogga Internetka ce.district196.org/ecfe
Mashruuca Sahmin wuxuu siiyaa fursado waxbarasho, bulsheed iyo madadaalo dadka waaweyn ee naafada ah wuxuuna dhiirigeliyaa ka mid noqoshada hawlaha bulshada. Ka -qaybgalayaashu waxay ku raaxaystaan fasallo iyo hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin farshaxanka iyo farsamada gacanta, bowling madadaalo, muusig, caafimaad iyo fayoobaanta, karinta, madadaalada, dalxiisyada, qoob -ka -ciyaarka, isboortiga, iyo qaar kaloo badan! Caawimaad bilaash ah ayaa la heli karaa.
Kala xariir Taleefoongan 651-423-7931
Bogga Internetka ce.district196.org/projectexplore
Waxbarashada Bulshada ayaa kugu martiqaadeysa inaad isticmaasho tas -hiilaadkaaga! Xarumaha Degmada 196 waxay u furan yihiin isticmaalka bulshada muwaadiniinta da 'walba leh. Inta badan tas -hiilaadka Degmada 196 waxaa loo heli karaa hawlo kala duwan, sida uu hagayo xeerarka degmada . Adeeg ahaan muwaadiniinteena, Waxbarashada Bulshada ayaa jadwaleysa, kormeeryaasha iyo isku dubaridka dhammaan adeegsiga bulshada ee xarumaha degmada. Waxbarashada Bulshada waxay siisaa tababaro goob-joog ah oo tababaran dhammaan kooxaha bulshada. Intaas waxaa dheer, ilaaliyeyaal badbaado leh ayaa la siiyaa dhammaan kirooyinka barkadda.
Kala xariir Taleefoongan 952-431-8780
Bogga Internetka ce.district196.org/facilityuse